भायनेटको नयाँ शाखा कास्कीको लेखनाथमा – Arthik Awaj
भायनेटको नयाँ शाखा कास्कीको लेखनाथमा
अन्तिम अध्यावधिक: July 12, 2020 - 12:42 pm (+05:45)
By आर्थिक आवाज	 २०७६ श्रावण १६ गते बिहीबार १०:४५ मा प्रकाशित
आर्थिक आवाज ।
इन्टरनेट र टि.भी. सेवा प्रदायक भायनेट कम्युनिकेसनले नयाँ शाखा पोखरा महनगरपालिका वडा नं. २७ तालचोक लेखनाथमा संचालनमा ल्याएको छ । बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच शाखाको उद्घाटन गरिएको छ ।
नेपालभर सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको भायनेटले आफ्नो १५औं शाखा तालचोक, बराल कम्प्लेक्स, लेखनाथमा खोलेको हो । विगत १९ वर्षदेखि भायनेटले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सन् २०११ मा भायनेटले नेपालमा पहिलो पटक फाइबर अप्टिक्स सेवा सुचारु गरेको थियो । सन् २०१६ मा भायनेटले आफ्नो ग्राहकहरुलाई उच्चस्तरीय टि.भी. सेवा प्रदान गर्नको निमित्त ८० भन्दा बढी एचडी च्यानल सहित २३० वटा च्यानल भएको नेटटिभीसँग साझेदारी गरेको छ ।
आजको समयमा भायनेट सन्तुष्ट ग्राहक भएको र उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने इन्टरनेट प्रदायकको रुपमा चिनिन्छ । १ सय ५० भन्दा बढी कर्मचारी रहेको कल सेन्टर मार्फत भायनेटले ३६५ दिन नै २४ सैं घण्टा ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य बोकेको भायनेटले ग्राहकहरुको सहजताका लागि सेल्फ–सर्भिस क्लाइन्ट–कष्टुमर पोर्टल र कष्टुमर मोबाइल एप् प्रदान गर्दै आएको छ । यस अन्तर्गत ग्राहकहरुले सजिलैसँग इन्टरनेट सेवाको प्रबंधन, निगरानी र सर्पोट सेवा प्राप्त गर्न सक्ने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णहरि भण्डारीले दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा प्रदान गरी ग्राहकको विश्वास जित्न आग्रह गरे ।
सरकारले चलाउन भन्दा भन्दै पनि किन चलेन सार्वज निक यातायात ?
रियलस्टेट व्यवसायलाई जोगाउन तत्काल कित्ताकाट खुलाउन माग
किया मोटर्सद्वारा उपत्यकामा थ्री एस सर्भिस बिस्तार
श्रीपती समाजसेवा पुरस्कार माइती नेपाललाई
‘जन श्रमदानबाटै बन्यो मार्गी गाउँमा बाटो’ बाटोका लागि बजेट पारिदिने सांसद पहारीको प्रतिबद्धता
नेपालमा बिमाको पहुँच बढ्ने क्रम जारी छ : अध्यक्ष चापागाईं
साइबर क्राइम र लागुपदार्थ दुर्रव्यसनी सम्वन्धी सचेतना